﻿	သန္ဓေတားဆေးများမှာ ပါဝင်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေက အန္တရာယ်ရှိသလား။ | Find My Method
သန္ဓေတားဆေးများမှာ ပါဝင်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေက အန္တရာယ်ရှိသလား။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ » ဘေးကင်းလုံခြုံမှု » သန္ဓေတားဆေးများမှာ ပါဝင်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေက အန္တရာယ်ရှိသလား။
သန္ဓေတားဆေးများအတွင်း အသုံးပြုထားသည့် ဟော်မုန်းများသည် လူလုပ်ဖန်တီးထားသည်  (ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ပြုလုပ်ထားသည်) ဆိုရုံမျှသာဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ခန္ဓာကိုယ်များမှ သဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်သည့် ဟော်မုန်းများ၏ ပုံစံများအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ဟော်မုန်းများအား ဤသို့တွေ့ဆုံစေခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုများကို ပြန်လည်လမ်းညွှန်ပေးပြီး ကိုယ်ဝန်ရှိလာခြင်းမှ တားဆီးပေးပါသည်။ ဤဟော်မုန်းများသည် ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည့်အပြင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သဖြင့် ကောင်းဆိုးနှစ်တန်ရှိလေသည်။ လူတိုင်းသည် မတူကွဲပြားစွာ တုန့်ပြန်ကြပြီး အဆိုပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာလည်း လူတစ်ဦးချင်းအပေါ်မူတည်၍ဖြစ်စေ သန္ဓေတားနည်းလမ်းအပေါ်မူတည်၍ဖြစ်စေ ခြားနားမှုရှိနိုင်ပါသည်  ။
“ သန္ဓေတားဆေးအတွင်း ” အသုံးပြုထားသည့် ဟော်မုန်းများကို “ လူလုပ်ဖန်တီးထားသည်” ဆိုသည်မှာ မှန်ကန်ပါသလား။ ဟော်မုန်းများသည် သင့်အတွက် ဆိုးကျိုးရှိစေနိုင်သည်မှာ မှန်ကန်ပါသလား။ Marie Stopes Australia , www.contraception.org.au/emergency/hormonal-contraception-harmful. ဒီဇင်ဘာလ 2020 တွင် ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသည်။
“သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် ဟော်မုန်းအသုံးပြုသည့် သားဆက်ခြားခြင်း၏ သက်ရောက်မှုများ။” Healthline , www.healthline.com/health/birth-control-effects-on-body . ဒီဇင်ဘာလ 2020 တွင် ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသည်။